Kutuswa imikhankaso yezingozi
Durban - Yize kube yimpelasonto emnyama emigwaqweni yakuleli ngempelasonto yePhasika, kodwa sibe phansi isibalo sabashonile kwanda esababoshelwe ukushayela bedle amanzi amponjwana nabebeshayela budedengu, kubika iSolezwe.
Abe-Road Traffic Management Corporation (TRMC) bathi izingozi okushone kuzo abantu abaningi ngesikhathi esisodwa kube ngezezimoto ezishayisane ngenxa yokuthi abanini bazo bebeshayela ngesivinini esiphezulu abanye beqisile ezinkambeni.
Okhulumela i-RTMC, uMnuz Ashref Ismail, uthe okwamanje bangu-157 abantu abashonile ngempelasonto ende yePhasika. Kulesi sibalo sabashonile ezingozini abangu-32 abaKwaZulu-Natal.
Uthe yize ukuphuma komphe-fumo owodwa emgwaqweni kuyinto engamele ithathwe kancane kodwa lesi sibalo siphansi uma siqhathaniswa nesangonyaka owedlule ngesi-khathi esifanayo lapho kwasho-na khona abantu abangu-297.
“NgoLwesihlanu sizokhipha izibalo ezingaphelele ngabantu abashonile yize izibalo eziphelele zizomenyezelwa ngemuva kwezinsuku ezingu-30.
“Lizwakele ikhwelo loMnyango wezokuThutha kubashayeli futhi amaphoyisa abengazibekile phansi ala uhasha emigwaqweni. Luselude ukhalo okusamele luhanjwe ekufezeni iphupho lethu njengoba sifuna ukuthi kungabi-kwa zingozi okuphangalala kuzo abantu,” kusho u-Ismail.